ပဲနီလေးနှင့်မုန်လာဥနီဟင်းချို ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ပဲနီလေး................၁ ခွက် (လက်ဖက်ရည်ပန်ကန်လုံး)
မုန်လာဥနီသေးသေး....၁ လုံး ( နုပ်နုပ်စဉ်း)
ကြက်သွန်ဖြူ..............၃ တက် (.......။.....)
ချင်းသေးသေး............၁ တက် ( .....။......)
မဆလာမှုန်. .............၁ ဇွန်း ( လက်ဖက်ရည်ဇွန်း)
ဆား+ ဟင်းခတ်မှုန်. ...သင့်ရုံ
ပဲနီလေးကို ရေစင်စင်ဆေးပြီးပြုတ်ပါ ( ပြုတ်နေချိန်အတွင်းဆားမထည့်ရ )
လက်ကျန်ဆီမှာ...နုပ်နုပ်စဉ်းထားတဲ့...ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ချင်း ကိုနနွင်းမှုန်.လေး
နှစ်သက်ပါက ဆူးပုတ်ရွက် ၊ ဂေါ်ရခါးညွှန်. ၊ မုန်ညှင်းဖြူ လေးတွေကို ဟင်း